Wararka Maanta: Arbaco, Feb 10, 2010-Dowladda dalka Yemen oo xabsiga u taxaabtay 253 tahriibayaal ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay
Dowladda dalka Yemen oo xabsiga u taxaabtay 253 tahriibayaal ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay Arbaco 10, Feb, 2010 (HOL) Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Yemen ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay 253-qof oo tahriibayaal Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira, kuwaasoo laga qabqabtay gobollo kala duwan.
Tahriibayaal ka kooban 92-qof oo si sharci darro ah ku marayay gudaha dalkaas ayay ciidamada ammaanku ku qabteen shalay oo keliya Gobollada Ticis iyo Xudueyiya.
Gobolka Xudeydiya oo keliya ayaa lagu qabtay 34-qof oo Soomaali ah oo 17 ka mid ah ay ahaayeen haween, sidoo kale Gobolka Ticis ayaa isagana lagu qabtay 56-qof oo Itoobiyaan ah, kuwaasoo 34-qof oo ka mid ah ay ahaayeen haween.
Tahriibayaasha la qabqabtay ayaa la sheegay inaysan ku jirin wax caruur ah, waxaana qabqabashada dadkan ay imaanaysaa iyadoo dowladda ay kusoo rogtay qoxootiga dalkeeda ku nool inaysan safrin.
Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Yemen ayaa sidoo kale qabtay 161-qof oo tahriib ku socday, kuwaasoo 60-qof oo ka mid ah ay ahaayeen Soomaali halka inta kelna ay ahaayeen Itoobiyaan, kuwaasoo doonayay inay sharcidarro ku galaan Yemen.
Hay'adda Qoxootiga ee Qarammada Midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tan iyo dhammaadkii sannadii hore ay dalka Yemen galeen 74,.000-qof kuwaasoo isugu jiray Itoobiyaan iyo Soomaali magangalyo doon ah.
Arbaco, February 10, 2010(HOL): Shir jaraa’id oo uu maanta qabtay madaxa warfaafinta maamulka Islaamiga ah ee gobollada Jubbooyinka Sheekh Xasan Yacuuq Cali ayaa waxa uu kaga hadlay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha colaadeed ee muddooyinkii ugu danbeeyay ka jiray xadka soomaaliya ay kala wadaagto Kenya gobolka j/hoose. Taliyaha Ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afirca oo sheegay in ay taageero hoose siinayaan Dowladda Soomaaliya 2/10/2010 3:08 AM EST